ukudabuka umsipha ka kwamadolo - lena zokugula sina okudinga sina ukuphathwa kanye eside nokuvuselelwa isiguli. It libhekene ukwehlukana zezinzwa izicubu Imicu yotshani enkothweni. Ngokuvamile isibopho kungase nje idabukile ngesigamu.
Kungani umonakalo kwenzeka futhi kanjani it kunqunywe?
Njengoba kuye kwashiwo, esimweni esinjalo ejwayelekile kubagijimi ngubani kufanele bahlale ukuqeqesha bese ugcine imisipha yakho esishubile. Ngezinye izikhathi abakwazi ukumelana ukudabuka. Isimo esifanayo kwenzeka ngemva buhlungu ngqo kwamadolo ngenxa yokuwa.
Yiqiniso, kungenteka uhlushwe nje abasubathi. Ngokwesibonelo, ukuthola umsipha izinyembezi ka kwedolo kungenzeka umuntu ovamile, ngubani ngengozi ngenye bawa. Nokho, imisipha yakhe azifundisiwe, ngakho ukulimala kungenzeka eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Kumkhathaze umonakalo isifo ngokuhlanganyela kanye lwamathambo kungenzeka. ingozi ukudabuka luyanda kwasebekhulile.
Izimpawu zesifo zibukeka emelelwa ngokushesha okukhulu. ukudabuka umsipha libhekene izimpawu ezifana:
nokuvuvukala kwendawo ethintekile;
ububomvu kwesikhumba endaweni ukulimala;
ngenkathi ngokugqamile wezwa break Crackle;
komkhawulo sina ukunyakaza (Umuntu akakwazi kuphela ukuhamba, kodwa nje setha unyawo ngonyawo).
imithi yesintu ngoba izifo
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi simo isiguli ngeke bakwazi, Ngakho-ke, noma kunjalo, wayedinga usizo ukuhlukumezeka. ukudabuka umsipha siqedwa ngokusebenzisa iqoqo izinqubo ezahlukene. Okokuqala, endaweni abalimele kumele nibeke cindezela abandayo ukusiza ingxenye ekudambiseni ubuhlungu. Ezimweni eziningi, iziguli kuyabekwa izidakamizwa nonsteroidal ( "ibuprofen", "Diclofenac"), ezisiza ekunciphiseni ukuvuvukala.
Ngokwemvelo, umuntu elimele kufanele phumula futhi ukhawule ngokuphelele ukunyakaza. Umlenze kufanele njalo siyibonakalise ephakanyiswe. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi abeke ngaphansi komcamelo wakhe noma umcamelo izingubo.
Ukukhiya ngokuhlanganyela wayevame ukusebenzisa amabhandeshi akhethekile amabhandeshi. Heat emlenzeni ngokushesha ngemva ukulimala ayikwazi ukubeka, njengoba kuzokhulisa ukugeleza kwegazi ukuze endaweni ezilimele.
Ukuze ukuphulukisa ngokushesha yokugcoba ekhethekile esetshenziswa izinyembezi. Ngokwemvelo, lokhu kusho Udokotela angase anikeze isiguli futhi Physiotherapy (electrophoresis, UHF), kodwa yena usiyala ukuze ngokushesha. breaking ekwelapheni emisipheni amadolo akhicitwe nakuchubeka usizo massage. Nokho, ubelokhu eqashelwa esikhathini nokuvuselelwa lesiguli, kanye Physiotherapy.
Uma ukudabuka aluphelele (engasetshenziswa kalula ekufinyelelwa kuso ngokubheka-X-ray Luhlolo lwangeNhlaba), izindlela ezishiwo ngenhla kwanele ukuze bayothola ukwelashwa. Ukusebenza senziwa izimo eziyinkimbinkimbi. amadolo ukudabuka nemisipha indlela olukhulu siqedwa futhi, uma engafanele noma fuse izicubu ukwelapha ngokwendabuko akakunikanga umphumela.
Ukusebenza liqukethe suturing kwezintambo zesivikelo sesifuba lilimele. Kuyinto ngaphansi izinzwa wendawo noma jikelele. Ukuze kokungenela zisebenzisa ithuluzi mncane kakhulu okuyothi Akubalulekile sebeziqhumbuza elikhulu esikhunjeni. Kulokhu, emva inqubo, uhlelo isiguli silulama ngokushesha, futhi igama elithi kokuvuselelwa kwakhe sinciphile.
Uma senza isixha ehluleka, kwenziwe ukufakelwa autologous izicubu lesiguli siqu kule ndawo obonakele. In an icala ngokwedlulele wasebenzisa sokwenziwa yokufakelwa.
Isisu ubuhlungu kanye nesifo sohudo? Kudingeka senze